yibakhona - ALinks
Amanqaku malunga nokujikeleza
Uyifumana njani i-visa yaseTurkey evela eMzantsi Afrika?
Agasti 4, 2021 UMaitri Jha iAfrika, yibakhona, ikarikuni, ivisa
Unokufumana i-visa ukusuka eMzantsi Afrika ukuya eTurkey kumasango omda waseTurkey (okwaziwa ngokuba yiVisa ekufikeni). Abantu abavela eMzantsi Afrika banokufumana i-e-Visa ekwi-Intanethi kwiNkqubo yeVisa yaseTurkey. Nabani na oya eTurkey
Ngaba uyafuna ukuhamba e-UK? Sebenzisa ezi Zothutho e-UK !!
Ngamana 20, 2020 UKaruna Chandna yibakhona, UK
Ezothutho e-UK Iindlela kunye neemoto ziindlela eziphambili zaseBritani zothutho lwasekhaya. Kukho iindlela ezimalunga neekhilomitha ezingama-225,000 eBritani. Ukuhamba ngemoto, iveni okanye iteksi zezona ndlela zixhaphakileyo zothutho, ukubalwa kwemali
Loluphi uhlobo lokuhamba onokuthi ulufumane e-China?
Ngamana 20, 2020 UAntika Kumari iTshayina, yibakhona
Inkqubo yezothutho yase China iye yaphucuka ukusukela ngo-1949. Namhlanje i-China inenethiwekhi ebanzi yezikhululo zeenqwelo moya, oololiwe, oohola bendlela, iindlela zangaphantsi, amazibuko kunye nemijelo yamanzi. Phakathi kwabo, oololiwe abahamba ngesantya esiphezulu, oohola bendlela, kunye neendlela ezininzi ezingaphantsi koomgaqo ongaphantsi ziye zabuphucula kakhulu ubomi bemihla ngemihla babantu balapha.
Ukufumana malunga ne-Italiya: Iingcebiso zokuThutha !!
Ngamana 18, 2020 UKaruna Chandna yibakhona, ElamaTaliyane
Inxalenye ebaluleke kakhulu kumalungiselelo eholide yakho yase-Italiya yindlela ohamba ngayo kwaye, ubukhulu becala, indlela ohamba ngayo. Ukuqonda kwakho kwemihla ngemihla e-Italiya kwahluka ngohambo lwakho. Enye yeendlela ezingabizi kakhulu inokuba ngoololiwe. Ukurenta
Isikhokelo sezothutho eDenmark, eScandinavia
Ngamana 16, 2020 UAntika Kumari Dominikha, yibakhona
IDenmark lilizwe eliquka iziqithi ezininzi. Ezi ziqithi zihambelana kakhulu nesixeko. Ayisixekwanga ziidolophu needolophu zaseDenmark ngoku ezidibeneyo, kodwa uninzi lokuya eYurophu nakwihlabathi liphela kunokufikelela eDenmark